Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Deegaanka / Gobol iyo degmooyin / Västra Götalands län / Mellerud
Degmada Mellerud Iswidhan waxeey ka tahay yaraan loo okeeysiiyay mid weeyn. Halkaan waxeey lee dahay xeeb maayl dheer leh oo dhanka Vänern, dhismaha beeraha, jiqooyinka, wabiyaasha iyo dhulalal sareeyo, xaafado weeyn iyo tuulooyin yar.
514 kiilomitir oo laba jibaaran
Vänersborg 45 kiilomitir
Uddevalla 65 kiilomitir
Karlstad 120 kiilomitir
Qiyaasti 250 000 qof ayaa booqda marinka buundada akvedukten kuna taala Håverud sanad kastaba.
Waxaan lee nahay goobo badan oo taariikhi ah, waxaana taajir ka nahay jawi dhaqameed. Mellerud waxaa ka dagi kartaa xaafad yar ama baadiyaha laakina isla markaa uu dhawaan kartaa magalooyinka waa weeyn.
Mellbo Liistada guri-kireeyayaasha
Mellerud waxeey lee dahay jawi urureed oo balaaran ayadoo leh 100 urur oo nuucyo kala duwan. Qofkii rabo in ka howl galo heeso waxaa jiro kooxo-heeso iyo kooxyaal-fanaanin.
Dugsiga dhaqanka ee Mellerud waxay sanad kastaba qabtaan dhowr bandhig oo muusig kana dhaca dhismaha dhaqanka ee Dal kuna taala Mellerud.
Waxaa Mellerud ka jira afar jaaliyadood oo kubada cagta ah.
Gudaha Julaay sanad kastaba waxaanu qaban-qaabinaa xaflad magaaleed leh waxyaabo loogo talogalay caruurta iyo dadka waaweyn.
Hoolkan waxaa ku taala barkad dabaal iyo meesha jimicsiga jirka labadaba.
Degmada Mellerud waxeey lee dahay dugsiyaal xanaano oo ku yaalo afar xaafado kale duwan. Bartamaha Mellerud waxeey sido kale lee dahay xanaaneeye-caruur ee maalmeed. Guriga xilliga firaaqada waxuu ku yaalaa shan ka mid ah dugsiyadeena hoose. Sido kale waxaa ka howl wado kaniisada Iswiidhan hoowl-caruur.
Qaar badan oo ka mid ah dugsiyadayada xanaanada waxay u dhawyihiin deegaanka dabiiciga ah oo caruurtu wakhti yar ayay banaanka joogi karaan maalin kastaba.
Degmada Mellerud waxeey lee dahay shan dugsiyaal hoose oo loogu tala galay ardayda ilaa fasalka 6aad iyo iskuulo loogu tala galay ardayda ku jiro fasalada 7-9. Sido kale waxaan lee nahay dugsi sare oo leh barnaanimjyo badan oo kala duwan. Sido kale waxaan lee nahay dugsi-dhaqameed soo bandhigaayo waxbarasho tumida heesaha, heesaha iyo ciyaaraha heesaha.
Ardayda dhamaan iskoolada waxay helaan kombiyuutaro iyo Ipad.
Akhri dheeraad ku saabsan dugsiga hoose-dhexe ee degmadan. Akhri dheeraad ku saabsan dugsiga sare ee degmadan. Iskoolka dhaqanka
Waxbarashada dadka waaweyn Iswiidhiska soo galooytiga Högskolan Väst Steneby
Shaqooyinka ka banaan gudaha Mellerud